भुटानी नेपाली ठिटोको अमेरिकामा यस्तो अपत्यारिलो लोभ लाग्दो छलाङ - Babal Khabar
भुटानी नेपाली ठिटोको अमेरिकामा यस्तो अपत्यारिलो लोभ लाग्दो छलाङ
December 30, 2021 by बबाल खबर
साभार डिसी नेपाल,
ऋषिराम कट्टेल। कोलम्बस/अमेरिका । अमेरिकाको मध्यपश्चिमी राज्य ओहायोमा भर्खरै जिएन इन्टरनेशनल ग्रोसरी खुलेको छ, निकै ठूलो, सम्भवत नेपालीभाषी कसैले पनि खोलेका छैनन् यति ठूलो।
ओहायो राज्यको राजधानी कोलम्बस नजिकैको शहर पिकरिन्टनमा खुलेको यो स्टोर देख्ने जो कोहीले पनि पक्कै भन्छ अमेरिकामा पनि यति नेपाली सामानको स्टोर।
त्यो नेपाली दैनिक उपभोग्य सामाग्री पाउने बडेमानको भवन देख्नेको मानसपटलमा आउला निकै ठूलै ब्यापारीले पैसा खन्याएछ।
भुटानमै गोबिनको हजुरबाको सानो रेष्टुरेन्ट थियो सर्वाङ जिल्लाको गेलेफुको लसल सिनेमा हल छेवैमा। पछि वुवा लीलाले नेपालमा बेलडाँगीमा कपडा पसलदेखि फोटो स्टुडियो खोले, फोन कल गर्ने कम्युनिकेशन सेन्टर चलाए। कतै सफल होइन्छ कि भनेर धेरै संघर्ष गरे। तर आज तेस्रो देशमा आएर छोराले पाएको लोभ लाग्दो सफलताले बाबुले छाती फुलेको छ। यो खबर यहाँबाट साभार गरियको हो ।
Prev१० करोडको कारमा १० रुपैयाँको पेट्रोल हाल्न गयपछी ! (भिडियो हेर्न नछुटाउनुस)
Nextयी नायिकाहरू जो मृ’त्युपश्चात करोडौं छोडेर अस्ताए, कसले कति छाडे ? जान्नुस